इपिएस परीक्षा २०१८ काे परीक्षा फारम भर्ने तथा परीक्षा मितिकाे सूचना प्रकाशित… पूरा बिबरण सहित हेर्नूहोस.. – पुरा पढ्नुहोस्……
इपिएस परीक्षा २०१८ काे परीक्षा फारम भर्ने तथा परीक्षा मितिकाे सूचना प्रकाशित… पूरा बिबरण सहित हेर्नूहोस..
परीक्षा फारम भर्ने मितिः २०७४ साल चैत्र ८ देखी १७ गते सम्म
परीक्षा मितिः २०७५ साल जेठ २६ र २७ गते ।
अनुमानित उतिर्ण संख्याः ७१०० जना ( उत्पादनमुलक क्षेत्रतर्फः ४८०० जना र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रतर्फः २३०० जना)
नाेटः अनलाइन फारम भर्न तथा त्यसकाे पूर्व तयारी (फाेटाे खिच्ने तथा पासपाेर्टस्क्यानिङ्ग अादी) लागि हाम्राे संस्थावाट सम्पूर्ण सेवा प्रदान गरिने जानकारी गराइन्छ ।
किर्तिपुर क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले इह्वा कन्सल्टेन्सी, नयाँ बजार, किर्तिपुरमा र
चावहिल – गाेङ्गबुँ क्षेत्रका विद्यार्थीहरूले वाइज् कन्सल्टेन्सी, चुच्चेपाटी, चावहिलमा सम्पर्क गर्नुहाेला ।
सम्पर्क फाेन नंः 9841220825, 9823063873 र 9823057930
यो पनि पढ्नूहोस……
कोरियामा रेमिट्यान्स : भ्रम र यथार्थ
अशोक मैनाली। दक्षिण कोरियाको चिसो मौसम बिस्तारै सामान्य अवस्थामा पुगेको छ। तर पछिल्लो समय यहाँ रेमिट्यान्स कम्पनीको आगमन सगैँ चलेको चर्चाको राप भने अझै सेलाएको छैन। नेपालीहरू बीच कुरा हुँदा चर्चा रेमिट्यान्स कम्पनीबाट नै शुरू हुन्छ।
रेमिट्यान्स कम्पनीको शुरूवात
विश्वमा रेमिट्यान्स कम्पनीको शुरूवात १९४६ मा यूरोपियन देशहरू स्पेन,ईटाली र आयरल्याण्डबाट भएको मानिन्छ। यूरोपियन देशहरू रेमिट्यान्समा धेरै निर्भर रहेका थिए। विस्तारै कामदारहरू अन्य देशमा जाने क्रम बढे सगैँ रेमिट्यान्सको बिस्तार व्यापक रूपमा भएको पाईन्छ। सन् २००२ देखि रेमिट्यान्स व्यवसायले व्यापक रूप लियो। सन् २०१२ मा भारत र चिनका कामदारहरूले मात्र १३० बिलियन डलर रेमिट्यान्स पठाएको बताईएको छ।
नेपालमा भने बैंकहरूको नै रेमिट्यान्स कारोबार शुरू गर्ने गरेकोमा पछिल्लो समय रेमिट्यान्स कम्पनीहरू पनि धेरै नै सन्चालनमा आएका छन्। दक्षिण कोरियामा भने रेमिट्यान्सको काम बैंकहरूले मात्र गर्ने गरेकोमा २ बर्ष कोरिया सरकारले रेमिट्यान्स कम्पनीहरूले पनि रेमिट गर्न पाउने निति ल्याएपछि रेमिट्यान्स कम्पनीहरू खोल्ने बाटो खुल्यो। बैंकहरूको बिरोधले रेमिट्यान्स कम्पनीहरू खुल्न केहि ढिला भएको थियो। र सो निती पारित भएको ढिला गरि भएपनि अन्तत रेमिट कम्पनीहरू भने खुले। जसले वैधानिक बाटोबाट रकम पठाउन चाहनेलाई सहज र सरल बनायो।
धेरैको चासो र प्रश्न हुने गर्छ, धेरै रेमिट कम्पनीहरू एकैपटक किन आए ? त्यसको कारण भनेको सरकारले लाईसेन्स दिन शुरू गरे सगैँ प्राय सबै कम्पनीहरूले केहि दिन र महिनाको फरकमा नै लाईसेन्स प्राप्त गरे। कतिपय कम्पनीहरूले कार्यालय स्थापना गरेर छिट्टै आफ्नो कारोबार शुरू गरे भने कतिपयले ढिला गरेर। र कतिपय गर्ने तरखरमा छन्। हाल सम्म कोरियामा १४ वटा रेमिट कम्पनीहरूले लाईसेन्स पाईसकेका छन् । भने ६ वटा कम्पनीले आफ्नो कारोबार नै शुरू गरिसके। अवैधानिक च्यानल मार्फत अधिकांश रकम नेपाल जाने गरेकोमा अहिले धेरै रकम बैधानिक च्यानल मार्फत जाने गरेको पाईन्छ। रेमिट्यान्स कम्पनीमा खाता खोल्ने र पैसा पठाउनेहरूको भिडले पनि यसको पुष्टी गर्छ।
धेरैको प्रश्न हुन्छ- एउटा रेमिट कम्पनीमा खाता खोलेपछि अर्को कम्पनीमा खाता खोल्न मिल्छ? नयाँ खाता खोलेपछि पुरानो स्वत बन्द हुन्छ ? सबैले प्रष्ट संग बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने कुनै पनि व्यक्ति ( वैधानिक रूपमा कोरियामा बसेको विदेशी वा कोरियन नागरिक)ले आफु चाहे जति रेमिट कम्पनीमा खाता खोल्न सक्छ।
अहिले खुलेका वा लाईसेन्स पाएका कम्पनीले एकपटकमा ३ हजार डलर र एक बर्ष भित्र २० हजार अमेरिकी डलर पठाउन पाउने अनुमती पाएका हुन् । कुनै पनि व्यक्तिले एउटा रेमिटबाट २० हजार डलर मात्र पाउने सत्य भएपनि उसले आफ्नो स्रोत खुलेको आम्दानी अन्य रेमिटबाट २० हजार डलरको अनुपातमा पठाउन पाउँछ।
कोरियाको आम्दानीको हिसाबले एउटा व्यक्तिले २ भन्दा बढि रेमिट कम्पनीमा खाता खोल्नु पर्ने देखिन्छ। अधिकाँशले धेरै कम्पनीमा खाता खोलेका पनि छन्। धेरै रेमिट कम्पनी हुनु यहाँ रहेका विदेशी नागरिकहरूलाई फाईदाको कुरा हो। उनिहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेवाको गुणस्तरलाई हेरेर आफुले चाहेको कम्पनीबाट पठाउन सक्नेछन्।
अनलाईन सेवाको बिषयमा पनि यथार्थता भन्दा बढि भ्रम रहेको पाईन्छ। कोरियामा लाईसेन्स पाएका कुनै पनि कम्पनीले पूर्ण रूपमा ‘अनलाईन रेमिट’ गर्ने अनुमति पाएका छैनन्। नो योर कस्टुमर (केवाईसी) सिस्टम सबै रेमिट कम्पनीहरूले पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले रेमिट कम्पनी मात्र होईन खाता खोल्न चाहनेहरूले पनि सरकारको निती र नियम पालन गर्नु नै बुद्दिमानी हुन आउँछ।
( पत्रकार महासंघ कोरिया शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष रहेका मैनाली हाल क्यूएस रेमिटमा आवद्द छन्। यो लेखकको निजी विचार हो। )Nayadainiki.com
स्रोत:- कोरियागतिविधी नेपाल/ कोरीयाखबर।
Prevआफुजस्तै खतरनाक खेलाडी बनिसके रोनाल्डोका छोरा पनि, छोराले गरेको यो गोलको तारिफ पूरै यूरोप भरि (हेर्नूहोस उनको यो गोल भिडियो)
Nextमालिकले कुट्दा बेहोस भय ढाड खुट्टा भाचिए : मृत्युलाई जितेकी चेली (भिडियो सहित)
मैले नेपाललाई विश्‍व चिनाएँ तर मलाई सरकारले चिनेनः किर्तिमानी धाबक रोकाया
नृत्यमा मात्र होइन गायनमा पनि अव्वल छिन्- तेरिया मगर ,यत्ति मिठो गाउँछिन् -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)